Maamulaha Porsche oo kahadlaya Apple | Waxaan ka socdaa mac
Sida laga soo xigtay xogaha ugu dambeeyay ee la xiriira Apple Car, tan Mashruuca soo saarida gaari koronto ku socda uma sii socdo sidii la rabay. Sidaas oo ay tahay, maalintii dhaweyd ee madaxa shirkadda Mercedes waxa uu sheegay in Apple ay si aad ah wax u wado, maalin kadib markii uu is casilay madaxii mashruuca. Waxbaa qaldan Ama laguma wargaliyo ama waad ka baqeysaa.
Cabsida mustaqbalka gaariga Apple ee wali maskaxda ku haya injineerada Cupertino? Si cad uma arki karo. Nasiib wanaag Maamulaha Posrche wuu hadlayaa maskaxdiisaSi ka duwan shirkadaha baabuurta sameeya badankood, waxay umuuqdaan inay hoos udhacayaan markii wax laga waydiiyo mustaqbalka Apple Car.
Kuwo badan ayaa khabiiro ah oo tixgeliya in Fikradda Apple ee ah inay gasho warshadaha otomaatiga madax iyo minjo midna ma leh. Ka tagida suuq aad si buuxda u xukuntay inaad gasho warshadaha otomaatiga ah ee tartamada iyo in ka badan oo ku saabsan gawaarida korantada halkaasoo Tesla uu yahay boqorka adduunka ee aan muran ka taagneyn, uma muuqato inay fikrad fiican u tahay mid ka mid ah falanqeeyayaasha.
Wareysiga warbaahinta Jarmalka ee lala yeeshay agaasimaha guud ee hadda ee Porsche, Olivier Blume wuxuu ku sheegay in «iPhone jeebka ayaa iska leh ee wadada ma saarna«. Hab wanaagsan oo lagu dhaleeceeyo go'aanka shirkadaha qaar ay isku dayaan inay ku boodaan suuqa baabuurta. Waxa kale oo uu sheegayaa in ballanqaadka shirkadaha qaarkood ay u hayaan wadista iskeed u arki doonin shirkaddiisa. Porsche ayaa dhowr jeer diiday inay iskaashi la sameyso shirkadaha teknolojiyadda si loogu qalabeeyo gawaarida caqliga macmalka ah. Shakhsiyan, uma maleynayo in qof kasta oo heysta lacag uu ugu raaxeysto Porsche inuu u iibsan doono inuu si iskiis ah ugu shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Maamulaha Porsche wuxuu ka hadlayaa Apple
Tiknoolajiyadda Li-Fi ma gaari doontaa kumbuyuutarrada Apple?